Rastrabani.com | बच्चाहरूले ओछ्यानमा पिसाब फेर्छन् ? नअात्तिनुस् यस्तो छ उपचार - Rastrabani.com बच्चाहरूले ओछ्यानमा पिसाब फेर्छन् ? नअात्तिनुस् यस्तो छ उपचार - Rastrabani.com
बच्चाहरूले ओछ्यानमा पिसाब फेर्छन् ? नअात्तिनुस् यस्तो छ उपचार
-डा. विनोद कुमार साह-
यी विधि अपनाएमा यस रोगको निदान हुने संभावना ७० प्रतिशत भन्दा बढी छ। यदि यी विधिहरू अपनाउँदा पनि समाधान भएन भने उपचारका लागि बालरोग विशेषज्ञसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
बच्चाले नचाहेर पनि राति पिसाब फेर्नु कुनै दोष हैन। यो साधारण समस्या हो जसलाई बच्चा परिवार समाज र परेमा डाक्टर समेत मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ।